1 Samueri 19:1-24
19 Kwapera nguva yakati, Sauro akataura nomwanakomana wake Jonatani nevashandi vake vose nezvokuuraya Dhavhidhi.+ 2 Asi Jonatani, mwanakomana waSauro, aifarira Dhavhidhi kwazvo.+ Naizvozvo Jonatani akaudza Dhavhidhi, achiti: “Sauro baba vangu vari kutsvaka kuti uurayiwe. Zvino ndapota, chenjerera, mangwanani, gara pakavanda urambe wakavanda.+ 3 Ini ndichabuda ndomira pedyo nababa vangu musango maunenge uri, ndotaura nababa vangu pamusoro pako, ndichaona zvichaitika, uye chokwadi ndichakuudza.”+ 4 Naizvozvo Jonatani akataura zvakanaka+ nezvaDhavhidhi kuna baba vake Sauro, akati kwavari: “Musaita kuti mambo atadzire+ mushandi wake Dhavhidhi, nokuti haana kukutadzirai uye mabasa ake ave akanaka kwazvo kwamuri.+ 5 Akaisa mweya wake pangozi,+ akauraya muFiristiya,+ zvokuti Jehovha akaponesa vaIsraeri kwazvo.+ Makazviona, mukafara. Saka mungatadzireiko ropa risina mhosva nokuita kuti Dhavhidhi aurayirwe+ pasina?”+ 6 Sauro akabva ateerera inzwi raJonatani, uye Sauro akapika achiti: “NaJehovha mupenyu, haazourayiwi.”+ 7 Pashure paizvozvo Jonatani akashevedza Dhavhidhi uye Jonatani akamuudza mashoko ose aya. Jonatani akabva auya naDhavhidhi kuna Sauro, akaramba ari pamberi pake sekare.+ 8 Kwapera nguva yakati, kurwa kwakaitikazve, Dhavhidhi akakurumidza kubuda, akarwa nevaFiristiya, akauraya vakawanda kwazvo,+ ivo vakamutiza.+ 9 Zvino mudzimu wakaipa+ waibva kuna Jehovha wakava pamusoro paSauro paakanga akagara mumba make aine pfumo muruoko rwake, Dhavhidhi achiridza nziyo noruoko rwake. 10 Naizvozvo Sauro akaedza kubayirira Dhavhidhi kumadziro nepfumo,+ asi iye akanzvenga+ Sauro, zvokuti akabayirira pfumo racho kumadziro. Dhavhidhi akatiza kuti apukunyuke usiku ihwohwo.+ 11 Gare gare Sauro akatuma nhume+ kuimba yaDhavhidhi kunoirinda uye kuti aite kuti aurayiwe mangwanani;+ asi Mikari mudzimai wake akaudza Dhavhidhi, achiti: “Kana ukasapukunyutsa mweya wako nhasi usiku, mangwana uchaurayiwa.” 12 Mikari akabva aita kuti Dhavhidhi aburuke nepahwindo, kuti aende, atize uye apukunyuke.+ 13 Mikari akabva atora mufananidzo weterafimu,+ akauisa pamubhedha, uye akaisa mambure emvere dzembudzi panzvimbo yomusoro wake, achibva aufukidza nenguo. 14 Zvino Sauro akatuma nhume kuti dzinotora Dhavhidhi, asi iye akati: “Ari kurwara.”+ 15 Naizvozvo Sauro akatuma nhume dzacho kuti dzinoona Dhavhidhi, achiti: “Uyai naye kwandiri ari pamubhedha wake kuti aurayiwe.”+ 16 Nhume dzacho padzakapinda, chokwadi pamubhedha paiva nomufananidzo weterafimu nemambure emvere dzembudzi panzvimbo yomusoro wake. 17 Sauro akati kuna Mikari: “Wandinyengedzerei+ zvakadai, zvokuti warega muvengi wangu+ achienda kuti apukunyuke?” Mikari akati kuna Sauro: “Iye ndiye ati kwandiri, ‘Rega ndiende! Ndingakuurayirei?’” 18 Asi Dhavhidhi akatiza, akapukunyuka,+ akasvika kwaiva naSamueri kuRama.+ Akamuudza zvose zvaakanga aitirwa naSauro. Iye naSamueri vakabva vaenda, vakagara muNayoti.+ 19 Kwapera nguva yakati, shoko rakasvika kuna Sauro, richiti: “Tarira! Dhavhidhi ari muNayoti iri muRama.” 20 Sauro akabva atuma nhume kuti dzinotora Dhavhidhi. Padzakaona vaprofita vakwegura vachiprofita, uye Samueri akamira munzvimbo yake achivatungamirira, mudzimu+ waMwari wakava panhume dzaSauro, idzowo dzikatanga kuita sevaprofita.+ 21 Pavakazviudza Sauro, akabva atuma dzimwe nhume, naidzowo dzikatanga kuita sevaprofita. Naizvozvo Sauro akatumazve nhume, boka rechitatu, naidzowo dzikatanga kuita sevaprofita. 22 Iyewo akazoenda kuRama. Paakasvika pamugodhi mukuru wemvura uri kuSeku, akabvunza kuti: “Samueri naDhavhidhi vari kupi?” Ivo vakati: “Vari kuNayoti+ iri muRama.” 23 Akaramba achifamba kubva ipapo achienda kuNayoti iri muRama, mudzimu+ waMwari ukava paari, uye akaramba achifamba, akaramba achiita somuprofita kusvikira asvika kuNayoti iri muRama. 24 Iyewo akapfekenura nguo dzake, akaitawo somuprofita pamberi paSamueri, akarara asina kupfeka zuva iroro rose nousiku ihwohwo hwose.+ Ndokusaka vakasvika pakuti: “Sauro mumwewo wevaprofita here?”+